Ruvengo, rese redhiyo rewebhu raungade mune imwechete app | Linux Vakapindwa muropa
Kana ndikakuudza kuti ndiri shasha yekuteerera redhiyo, ndinenge ndichikunyepera. Ini pachangu, handidi vamwe "kundiudza" zvekuterera uye nguvai. Ini ndinoda Metal, uye handifarire simbi dzese chero nguva. Nechikonzero ichocho ini ndinowanzo gadzira zvinyorwa, asi izvo zvinyorwa zvinogara zvakafanana kunyange kana ndikazviisa zvisina kurongeka. Ndeipi sarudzo yepamusoro yekuterera kune zvandiri kufarira uye isingadzokorore? Izvo chete zvandisingade: chiteshi cheredhiyo. Asi chiteshi ichocho chinofanirwa kuve icho chandinoda uye icho chinogona kuwanikwa mukati Odio.
Kana ndichifanira kuva akatendeseka, ini handizive kuti nei vakasarudza iro zita kudaidza iyi app. Ini handina chokwadi nazvo zvine chekuita nezvinoreva muchiSpanish, asi zvirinani zvichave nyore kuyeuka. Ruvengo chishandiso chinowanikwa cheLinux, macOS uye Windows izvo ichatibvumira kuteerera zviuru zveredhiyo mahara kubva kuapp imwechete. Uye iyi yakapusa app, zvekuti haina kana sarudzo, ichizvisarudzira kusarudza pakati pechiedza kana rima theme.
1 Ruvengo runowanikwa mune dzakajeka uye nerima madingindira
2 Inowanikwa seyese snap pack
Ruvengo runowanikwa mune dzakajeka uye nerima madingindira
Kuruboshwe tine zvikamu:
Raibhurari yangu: chiteshi chega chega, patinopfuudza iyo inotora pamusoro payo, ichatiratidza moyo padyo nechimwe chiratidzo. Moyo unotibvumidza kuti tiuchengete muraibhurari yedu, nepo imwe icon ichatiratidza chimiro chenhepfenyuro.
Recently Viewed: nhepfenyuro dzine mbiri yatakashanyira ichachengetwa pano.
Countries: muchikamu chino tinogona kupinda muchikamu chenyika imwe neimwe. Yakakurudzirwa kana iwe uchiziva zvekuteerera, senge nhabvu kana nhau, asi kwete kana tichida kuteerera kune imwe mhando yemumhanzi.
Languages: muchikamu chino tinogona kugadzirisa mitauro yezviteshi. Kunze kwekunge tichida kuteerera hurukuro yeredhiyo, ndinofunga kuti zvakanaka kuvasiya vese.
Tags: Pano tichaona (hombe) runyorwa rwemavara, senge 80s mimhanzi, masitaera uye nezvimwe.
musha: iyo huru skrini.
Settings: marongero kubva kupi panguva yekunyora iyi posvo isu tinogona chete kusarudza musoro wenyaya.
About: ruzivo nezve Ruvengo.
Tsigira Ruvengo: kupa mupiro.
Bhugi mushumo: kuzivisa bugs.
Muchikamu chepamusoro, chitsitsinho chidiki kuruboshwe, a bhokisi rekutsvaga rine zvinyorwa "Tsvaga zviteshi ...». Iri bhokisi rekutsvaga ndiro iro rinotifadza chaizvo: tinogona kutsvaga chero izwi uye rinenge riine mukana wekuriwana. Kana tikaisa zita reboka rine mukurumbira, senge Metallica kana Iron Maiden, zvinokwanisika kuti isu tinotowana redhiyo yemapoka iwayo umo isu tinoteerera kumhanzi nanyanzvi iyeye. Asi ini ndinofunga chinhu chakanakisa kuwana mhando yemimhanzi.
Inowanikwa seyese snap pack
Ruvengo runowanikwa kubva Iyi link. Kana ndisina kukanganisa, handisi kuwana imwe sarudzo, tinogona kuiisa kubva ku snap package kumhanya kuraira:
Chatinofanira kugara tichifunga ndechekuti tinenge tichiteerera redhiyo, zvinoreva kuti dzimwe nguva tinonzwa kushambadza kana imwe mhando wedge. Izvi hazvizove dambudziko kune avo vakajaira kuteerera redhiyo uye naRuvengo tinogona kuteerera kune zviteshi chero zvatinoda. Iwe unofungei nezvaRuvengo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Ini ndinovenga, rese webhu redhiyo iwe yaungade mune imwechete app
Iko kune kukanganisa mune yekuraira yekuisa iyo package ... vanoisa APT uye kwete snap
Mhoro Santiago. Ndatenda nechinyorwa. Aive makore mazhinji aine apt-tora uye ikozvino achishandisa chete apt. Dzimwe nguva ndinozvipotsa.
Thanks zvekare. Shuwiro yakanakisa.